'क्लिन फिड' नभएका १२० च्यानल बन्द, 'क्लिन फिड' किन आवश्यक ?
‘क्लिन फिड’ नभएका १२० च्यानल बन्द, ‘क्लिन फिड’ किन आवश्यक ?
काठमाडौं । सरकारले शुक्रबारबाट नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले म्याद नसार्ने अडान लिएपछि ऐनद्वारा निर्धारित मितिबाटै क्लिन फिड लागू भएको हो । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानल कात्तिक ७ गतेसम्म क्लिन फिड भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्लिन फिड लागू गरेसँगै नेपालबाट हेर्दै आएका १२० विदेशी च्यानल बन्द भएका छन् । सरकारले व्यवसायीहरुलाई विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउन यसअघि नै एक वर्षको समय दिएको भए पनि व्यवसायी र ती च्यानलले पर्याप्त तयारी नगर्दा दर्शकले हेर्न नपाउने भएका हुन् ।
विदेशी ब्रोडकाष्टरहरुले तत्काल क्लिन फिड च्यानलहरु दिन नसकेको भन्दै उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि ती च्यानल बन्द भएको सूचना टेलिभिजन स्किनमा राखिएको छ । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अनुसार परीक्षणमा रहेका केही अमेरिकी च्यानल एक साताका लागि विज्ञापनसहित आउन सक्ने भए पनि क्लिन फिड लागू गर्न नसकेका १०० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्दै हुने छन् ।
महासंघ अध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार विदेशी च्यानलले क्लिन फिड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा करीब १० दिनपछि केही टेलिभिजन हेर्न पाइनेछ । उनी भन्छन्, “क्लिन फिडका लागि तयारी गरेका केही विदेशी च्यालन परीक्षणमा छन् । केही दिनमा आउने गरी तयारी भइरहेको हुनसक्छ ।”
सुबिसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार भारतीय टेलिभिजन नेटवर्क ’जी’ र ’सोनी’को प्याकेजअन्तर्गतका च्यानलहरु मात्र विज्ञापनरहित कन्टेन्टमा आएका छन् । जी नेटवर्कअन्तर्गत जी टिभी, जी न्यूज, जी सिनेमा, ७ पिक्चर्स, जीङ, जी क्याफे, जी क्लासिक, जी एक्सन लगायत च्यानल छन् । सोनीको प्याकेजमा सोनी इन्टरटेनमेन्ट, सोनी सब, सोनी म्याक्स, सोनी सिक्स, सोनी टेन लगायत छन् ।
क्लिन फिड नभएर नआएका कारण स्टार, डिस्कभरी, बीबीसी, सीएनएन, कलर्सलगायत चर्चित च्यानलहरु बन्द भएका छन् । कलर्स, स्टार स्पोर्टस्, स्टार प्लसलगायत च्यानल पनि क्लिन फिड पालना नगरेका कारण बन्द भएको केवल टेलिभिजन महासंघले जनाएको छ । स्टार स्पोर्टस्, स्टार स्पोर्ट सेलेक्ट लगायतका च्यानलसमेत प्रसारण नभएका कारण नेपाली दर्शकहरु इंग्लिस प्रिमियर लिग, इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) लगायत फुटबल तथा क्रिकेटका चर्चित लिगहरु आजैबाट हेर्न बन्चित भएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले सरकारले आवश्यक तयारी नगरी दशैं र कोरोना महारमारीले फूर्सद रहेको बेला धेरै टिभी हेरिने समयमा दर्शकलाई विदेशी च्यानल हेर्नबाट बञ्चित गराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तयारीका लागि दुई चार दिन मात्रै नआउने हो भने ठिकै होला, बन्दै गराउँदा त सूचनाको हकबाटै बञ्चित गराइयो ।”
किन आवश्यक छ क्लिन फिड ?
अहिले नेपालमा प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरिदिएवापत पैसा लिने गरेका छन् । ती च्यानलले विज्ञापन पनि बजाएर दोहोरो फाइदा लिइरहेका थिए । अब भने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरू प्रसारण गर्न नदिने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले केबल टेलिभिजनलाई क्लिन फिड बनाए पनि इन्टरनेटमा आधारित आईपी टीभीको भने नियमन चुनौतीपूर्ण छ । प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर नभएका वा भएका चलचित्र सहजै इन्टरनेटमार्फत प्रसारण हुने गरेका छन् ।
आईपी टीभीले हाल प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्समा सहजै अनधिकृत टीभी तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीसमेत उपलब्ध हुन्छ । यसलाई सरकारले बन्द नै गर्नुपर्ने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् । महासंघले ‘डाउन लिंक’ अनुमति लिएका भन्दाबाहेकका अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
<<< : लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा राख्ने तयारी
सुन्धारास्थित मदिनी मस्जिदमा तोडफोड, भूमाफियासँग मिलि वडाध्यक्षले भत्काएको आरोप : >>>
पिउन योग्य छैन प्रशोधित पिउने पानी
थप १,४७४ जनामा कोरोना संक्रमण, १,९३१ जना निको भए
एकैसाथ ३९६ अस्पतालको शिलान्यास, निर्माण खर्च ५८ अर्ब लाग्ने
द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न भ्रमणमा आएको हुँ : चिनियाँ रक्षामन्त्री
अनलाइन व्यापारको नियमन गर्न कानुन बन्दै